मनमाेहनले शिलान्यास गरेकाे सडक २३ वर्षपछि कालाेपत्रे सकिँदै ! – ejhajhalko.com
मनमाेहनले शिलान्यास गरेकाे सडक २३ वर्षपछि कालाेपत्रे सकिँदै !
२४ माघ २०७४, बुधबार ०२:३६ 151 पटक हेरिएको
अछाम । बाजुराको सदरमुकाम जोड्ने सडकको शिलान्यास २०५२ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेका थिए । सो सडकको निर्माण कार्य धिमा गतिमा भइरहेकाे थियाे । अछामको साँफेबगर र बाजुराको सदरमुकाम मार्तडी जोड्ने मुख्य सडकखण्डकोे काम २३ वर्षपछि मात्र अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कछुवाको गतिमा निर्माण भएको सो पक्की सडक सदरमुकाम मार्तडीसम्म पुग्ने छ ।
०७१ जेठमा निर्माणको जिम्मा पाएको पियस कन्स्ट्रक्सनले बार्जुगाढदेखि मार्तडीसम्मको सडक म्याद थपेर ०७५ जेठभित्र पूरा गर्ने गरी कामलाई तीव्रता दिएको छ । पियस कन्स्ट्क्सनका सह–इन्चार्ज प्रेम थापाले अब एक महिना भित्रै काम सकिने बताए । नयाँ पत्रिकाबाट